ICoSchedule: Ikhalenda Lokuhlela Nokushicilela Komphakathi leWordPress | Martech Zone
NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 15, 2014 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 15, 2014 Douglas Karr
Wow… nje wow. Ngangifunde mayelana I-CoScedule ezinyangeni ezimbalwa ezedlule futhi ekugcineni ngathola isikhathi sokubhalisela ukuqulwa kwecala futhi ngilihlole. I-plugin emnandi ngokuphelele enamakhono amaningi engangikucabanga.
Amandla wokubheka ibhulogi yakho ye-WordPress nge ikhalenda yokuhlela yokuthunyelwe kwakwenziwe ngaphambilini, ngisho nangamandla okuhudula nokudonsa. ICoSchedule ithatha ikhalenda lokuhlela liye ezingeni elisha ngokuphelele, noma kunjalo. Esikhundleni sokwenza ikhalenda libe umbono nje, empeleni benze yonke i-interface yomsebenzisi ekukhiqizeni okuqukethwe kwebhulogi yakho kanye nokwabelana ngayo nomphakathi.
Nazi ezinye izici engizithanda ngokuphelele:
Ukuphakanyiswa Komphakathi Okuzayo - kunama-plugins amaningi wokukhuthaza umphakathi, kufaka phakathi amandla we IJetpack yokwazisa ngokuthunyelwe kuzo zonke iziteshi zenhlalo. ICoSchedule ikuthatha okuningana yize inamandla okushicilela ukukhushulwa komphakathi ezinsukwini ezizayo, amasonto noma izinyanga!
Okusalungiswa kufasitelana - ungacabanga ukuthi ngiyinadi, kepha nginezinhlaka ezingaba ngu-30 kubhulogi yami njengamanje. Akukhona ukuthi sengikhohliwe ngabo, kwesinye isikhathi ngithinta inkampani engiyibhalayo ukuthola eminye imininingwane. Kwesinye isikhathi ngikhohlwa ukuthi nginezinhlaka eziningi kakhulu… kepha iKhalenda le-CoSchedule line-sidepane elivela nakho konke okuthunyelwe kwakho uma ulikhulula. Ngemuva kwalokho ungahudula bese uphonsa okuthunyelwe ekhalendeni lapho ufisa ukukushicilela!
Izabelo Zethimba - qala okuthunyelwe okusha ekhalendeni futhi ungakunika omunye wababhali bakho, indlela enhle yokuphatha ithimba lakho futhi uqinisekise ukuthi uthola ukuthunyelwa okulinganiselayo kokuthunyelwe okuvela kuwo wonke umuntu (noma isihloko esivela kothile othize) ngokulindelwe yosuku lokushicilela!
Ukuhlanganiswa - Seamless isikhumbulo sesikhana ukuhlanganiswa kanye neBitly yokunciphisa i-URL, i-Google Analytics yokulandela umkhankaso, i-Custom Analytics (uma usebenzisa okuthile okufana neWebtrends noma iSayithi Catalyst), kanye nokuhlanganiswa kweGoogle Calendar ukubuka okuthunyelwe kwakho kukhalenda lakho!
Tags: kancanei-bufferukulandelela umkhankasocoscheduleikhalenda le-googleumkhankaso we-googleukushicilela kwezenhlaloi-wordpress ukushicilela kwezenhlalo